China 3Z Cultivator ho an'ny orinasa katsaka landihazo sy mpamatsy | RY AGRI
Ireo milina fambolena dia miompana indrindra amin'ny masinina izay ampiasaina amin'ny fanalana ahi-dratsy, famahana ny tany, fanapotehana sy fanamafisana ny tany, fambolena ny tany ary fitobiana mandritra ny fotoam-pambolena, na hamita ireo asa etsy ambony ireo ary hanao zezika amin'ny fotoana iray ihany. ao anatin'izany ny mpamboly feno, ny mpamboly andalana ary ny mpamboly manokana. Ny mpamboly feno dia ampiasaina amin'ny fanomanana ny fandriana voa, ao anatin'izany ny fanomanana alohan'ny famafazana, fitantanana ny tany loaka, fampifangaroana zezika simika sy zavatra simika. Ny asa eo anelanelan'ny fambolena dia ny fanalefahana ny tany, ny fanapotehana ny tany, ny zana-ketsa manify, ny ahidratsy, ny fanaovana topdressement ary ny fambolena furrow. Ny mpamboly manokana dia ampiasaina amin'ny asa manokana any amin'ny tanimboly, zaridaina dite ary fambolena fingotra.
Ny mpamboly zaridaina mpamboly 3Z dia mety amin'ny fambolena katsaka, landihazo, soja, betiravy sns ... Izy io dia afaka manatanteraka fambolena, fantsakana, mitaingina, famotsorana lalina, sns. Ilay mpamboly rotary dia afaka mamaky ny tany manamafy, ny tany malalaka ary mitazona ny tany ambanin'ny tany. rano amin'ny tany, ary diovy ny vodin'ny vokatra. Ity milina fambolena ity dia rafitra mirindra. Milamina sy maharitra ary mahomby be izy io.
Amin'izao fotoana izao, ny mpamboly andiany 3Z dia tsy manana afa-tsy ny manafoana sy mamaha ny tany. Raha mila fiasa hafa ny mpanjifa toy ny zezika sy ny tanimboly rotary dia azontsika atao ny manamboatra azy ireo. Mila mifanandrify amin'ny maodely isan-karazany isika araka ny faritry ny soavaly mpitaingina traktera. Raha avo loatra ny herin'ny traktera dia mora ny manimba ilay masinina. Raha kely ny tora-tsoavaly traktera ary lehibe loatra ny masinina, dia ho sarotra ny miasa mandritra ny fizotran'ny fiasa, ary sarotra ny manatratra ny vokatra azo. Noho izany dia zava-dehibe tokoa ny mampita ny tontolon'ny fampiasana ny milina sy ny fitaovana amin'ny dingana voalohany.
1.Ito dia toeram-pambolena, mpamboly zaridaina misy traktera 18-80hp.
2.Ny halalin'ny fiasan'ity mpamboly ity dia azo ovaina.
3.Ny tendron'ny angadinomby dia azo voafantina ho an'ny ilainao.
Teo aloha: Harrow disk mavesatra ho an'ny 1BQX fambolena
Manaraka: Mampihatra angadinomby ho an'ny varotra ny toeram-pambolena
Spring Tine Ripper Ho an'ny traktera 3 Point Ripper F ...